Archives Andron'ny orana - IntoKildare
Matetika ny andro mando amin'ny fialantsasatra dia midika fialofana ao anatiny izay tsy dia be atao. Soa ihany fa zatra manana orana iray na roa any Irlandy ianao ary hahita hetsika sy fisarihana anaty maro ho an'ny ankizy sy ny olon-dehibe.
Tsy misy toerana toa an'i Kildare, rehefa miposaka ny masoandro. Manomboka amin'ny làlam-pandehanana manaitra, mankany amin'ny lakandrano tsara tarehy sy ireo reliky ny taloha tany Irlandy taloha, tena tsara tokoa ny Thoroughbred County! Saingy aleo aloha hatrehana, mahazo ny anjarantsika amin'ny andro orana isika, ary tsy voatery hanome ny lavadrano amin'ny andro mando foana. Raha tokony hamela ny fanahintsika hanimba ny toe-tsaintsika ny andro ratsy, anio any Into Kildare, dia namory ny zavatra tsara indrindra hatao any Kildare isika rehefa avy ny orana!
Mitadiava fanomezana tonga lafatra miaraka amin'ny fisafidianana jiro haingon-trano fahagola, fitaratra, lamba, fanaka ary entana voavonjy.
Ny Kildare Town Heritage Center dia mitantara ny iray amin'ireo tanàna tranainy indrindra any Irlandy tamin'ny alàlan'ny fampirantiana multimedia iray nahafinaritra.
Ny traikefa Virtual Reality dia mampita anao any aoriana amin'ny dia mampihetsi-po sy majika any amin'ny iray amin'ireo tanàna tranainy indrindra any Irlandy.